トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada dooneysa geeska kala duwan ee qowladda pachinko ah
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan leenahay tiro sii kordhaysa oo tii pachinko si loo soo dajiyo geeska kala duwan. dhinaca Sida caadiga ah, waxaan ku adkayn by dhinaca dhowr cabbir ee model la mid ah, geeska Kala duwan ee, sidoo kale ayaa mid mid dhigay a model sooca ah gebi ahaanba kala duwan. Marka loo jecel yahay waxaa ku jiray lagu daydo, oo ku filan in ay ku riday shan la sidoo kale lagu rakibay lix, sababaha sida caanka ah ee howlgalka ma uusan dheggan, model ah in mar dambe idin siinayaa doorashada laakiin in meesha laga saaro, waayo, macaamiisha kuwaas oo doonaya in ay wali ciyaaro, ama oggola inay ka tagaan unugyada yar oo keliya, waxa ay leedahay geeska kala duwan si ay ama helay ciyaaro nostalgic inay soo bandhigto miiska loo isticmaalo. In
, sida geeska kala duwan, faa'iidooyinka iyo khasaaraha in ujeedadoodu tahay, waxaan eegi doonaa wixii ay u.
First of dhan, waa faa'iido, laakiin ma og dhibic doorashada iyo pachinko noocyo kala duwan oo lagu daydo, sababtoo ah geesood yihiin ciyaaro badan, waa in ay fududahay in la waraabe. Intaa waxaa dheer, waxay noqonaysaa inay noqon sixitaanka ciddiyaha macaan, waxaa la yaab leh ka ciyaari lahaa. geeska
kala duwan, ilaa mashiinka Creech sare ka Dejihane, waxaa jira noocyo kala duwan oo lagu daydo sooca ah. Markii hore, laakiin Dejihane ayaa lagu rakibay badan, sidoo kale waxa uu kordhay hufan mashiinka Creech sare hadda waa. geeska kala duwan, sidaa darteed waxay noqonaysaa inay noqon sixitaanka ciddiyaha macaan badan tusaalayaal kale, waayo, kuwii ku dhuftay mashiinka Hanemono ah, kuwaas oo Hanemono in lagu rakibay ee geeska kala duwan ee, sidoo kale waxaa doono si lama filaan ah ama indhaha Ujeedada in sidoo jeedin ahaa.
iyo geeska kala duwan, sidoo kale waxaa jira qowladda pachinko in artist ciddiyaha ayaase ah keliya laga bilaabo sixitaanka dhidib ah waa mas'uul ka ah, si aad u heli kartaa miiska khasnad lama filaan ah waxaa jira isku dari kara a ka badan cidiyaha ku qabsatay dhidibkii halyeeyga sixitaanka caadiga ah kalkaaliyayaasha dhufan, weli dadka ku socdaan bartamaha Hanemono waa indhaha ujeedada.
Intaa waxaa dheer, kuwa la geeska duwan ciyaaro, waxaan leenahay dad badan oo aad u badan ma oga pachinko ah. In
dhawaan, waxaa si ama leeyihiin hawlaha adag sida duwanaansho itimaalka qarsoon, adiga ama aan joojiyay ogeysiis la'aan in ku jira dhuunto. Ma jaaniska aad in ay xirtaan waa in miiska sida Sare ee waa, inaad geeska kala duwan.
iyo, sida darrada ah, gaari iyo waxqabadka of model kasta waa, iyo in Waa in la xusuusnaado si yihiin oo dhan oo kala duwan, sidaas Dejihane waxaa jira dad badan, waa in aan halkaas waa Details badan oo model ah in ay noqon kartaa kulan. In geeska duwan, moodooyinka kala duwan ayaa lagu rakibay ee mid kasta. Sidaas daraaddeed, oo dhan soo saaro kala duwan.
oo gaari waa, haddii Heer sare ah ee isku halaynta gaari karin, waxay leeyihiin in la xasuusto in waxqabadka ka, mar dambe ma ay xitaa ogaan doonaa marka joojiyay waqtiga sidoo kale sii. Haddii aan la ogeyn oo dhan, oo xataa meeshii ilayska si fiican toobad keen aan loo eegayn sida sixitaanka ciddiyaha, set wanaagsan Horukon, xitaa haddii aan ka dareemo mowjado ROM waa wanaagsan yahay muuqataa, waxaa ka maqnaan doona saldhigyada ciyaarta.
Oo hadlayay of kala duwan, tii badan pachinko in ay u ciyaaro waa ujeedada ugu weyn, waxaa shaki la'aan noqonayaa rakibo badan ee Dejihane ah. Haddii
Dejihane, Macoow iyo saxayo cidiyaha yar, ciidamada taagta daran qarxa ah heshay ka, ma aha cabsi leh sida qowladda pachinko ah.
kooban Hanemono, waa dadka Tachimawa 'xarunta Dejihane waa isku day isha sidoo kale geeska kala duwan? Waxa ay noqon doontaa garawsannay in. Haddii, qowladda badan pachinko waa ujeedada ugu weyn ee play in, ciday ku sii kordhaya tirada rakibidda Dejihane. Haddii
kooban Hanemono, waa dadka Tachimawa 'xarunta Dejihane waa isku day isha sidoo kale geeska kala duwan? Waxa ay noqon doontaa garawsannay in.